UIP250MTP - Sonication of Microtiter Plates - Hielscher Ultrasound Technology
I-UIP250MTP – Sonication of Microtiter Plates
Iprosesa ye-ultrasonic i-UIP250MTP ivumela ukunikezwa kwe-slide okuqhubekayo kwe-platetta yonke ye-microtiter ngaphakathi kwe-sonotrode. Ingasetshenziselwa i-homogenizing, ukuhlakazeka, i-degassing noma ukuphazanyiswa kwamaseli.
Le modeli ye-UIP250MTP inqanyuliwe futhi esikhundleni sayo kufakwe i- I-UIP400MTP. Sicela uvakashele ikhasi le I-UIP400MTP ukuthola imininingwane yamanje mayelana ne-micro-plate sonication.
Vele, sisanikezela ngezinsiza nezinsizakalo imodeli ngayinye!
Amandla we-ultrasonic asatshalaliswa ngokulinganayo ngokusebenzisa umthombo ngamunye we-plate microtiter ekunika imiphumela engaguquguquki futhi ephindaphindiwe ye-sonication. Ngaphezu kwalokho, ukuphakama kwe-oscillation kuyashintsha futhi kugcinwa ngenani elilungisiwe lonke lezinsuku zokubeletha.
I-UIP250MTP iqukethe i-watts generator engu-250, i-sonotrode ne-hood edingekayo yokuvikela umsindo (ingilazi ye-acrylic). Lokhu kwenza kube yunithi ephelele yokuma eyedwa elula ukusetha nokusebenza. I-generator ye-ultrasonic ihlelwe ukuvama kwe-sonotrode ngokuzenzakalelayo ukuze kungabi nokulungiswa okudingekayo okudingekayo (isib. Uma kwenzeka i-sonotrode ehlile). Ama-tubes amabili axhunyiwe avumela ukugeleza okuqhubekayo ketshezi ku-sonotrode.
I-UIP250MTP ingaqhutshwa ngokuqhubekayo (isib. 24/7). Kuyinto evulekile-egijima evikelwe futhi ingahlanzwa futhi ivikeleke kalula nge-disinfected kalula. Ukuqhutshwa kwamapulisi noma izinkathi zokuhlukunyezwa ezihlukene kungahle kulungiswe iphaneli langaphambili le-generator ultrasonic.
Cela Proposal salokhu Into!
Ukwamukela isiphakamiso, sicela ufake imininingwane yakho efomini elingezansi. A ekucushweni kwedivayisi evamile pre-ezikhethiwe. Zizwe ukhululekile ukukhethwa ubukeza ngaphambi kokuba uchofoze inkinobho ukuze ucele isiphakamiso.
I-Ultrasonic Processor UIP250MTP-Setha
i-processor ultrasonic ye-sonication ye-microtiter ipuleti, 250W, 20kHz, i-amplitude eguquguqukayo kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukulawulwa kwe-pulse ratio ne-sonication time, i-transducer ensimbi yezinsimbi ezingenasici, uxhumano lwamanzi okupholisa, i-2m ikhebuli phakathi kwe-generator ne-transducer, eyenziwe nge-sonotrode i-titanium, ethwele indawo engu-150mmx90mm yamapuleti ama-microtiter, kuhlanganise. i-hood yokuvikela umsindo eyenziwe nge-acrylic glass
115 Volts, AC, isigaba esisodwa, 8A, 50-60Hz
I-230 Volts, AC, isigaba esisodwa, 4A, 50-60Hz
Amandla Amandla PowMet115
ehlukahlukene, ukuze kuboniswe amandla wamanje, amandla okucubungula kanye nesikhathi sokusebenza cumulated, 115V ~ 1P, 50-60Hz
Amandla Amandla PowMet230
ezihlukahlukene, ukuboniswa kwamandla wamanje, amandla okucubungula kanye nesikhathi sokusebenza cumulated, 230V ~ 1P, 50-60Hz
Ama-Ultrasonic Dismembrators Asebenzayo Kakhulu
I-VialTweeter – Sonication Intensive of Volumes Small
Ukulungiselela Isampula nge-Ultrasonic VialTweeter
I-UP200St ne-VialTweeter yokulungiselela isampuli esisodwa
I-UIP10000 – Amandla amakhulu e-Ultrasonic Clusters